osnepaltvs – osnepal tv
उर्लाबारी का’ण्डको र’ह’स्य बल्ल खुल्यो,मृ’त’कका बुबा रुदै मिडियामा आए,ह’त्या’रालाई ६ दिनमा किन छोडियो ? (भिडियो सहित)
in banner, breaking
ओली र देउवामा समानता
March 1, 2020, 2:15 pm
पर्यटकीय सूचीमा ५७औँ स्थानमा परे पनि आझेलमा पदै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
काठमाडौ, फागुन १८ – बाघको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षणको उद्देश्यले पछिल्लोपटक २०६७ सालमा स्थापना भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा नेपालजञ्जसँग जोडिएको हुँदाहुँदै पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । यस निकुञ्जलाई सरकारले सयवटा पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा ५७औँ स्थानमा राखेको छ । More
March 1, 2020, 1:35 pm
काठमाडौँ- हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो । तर, फर्सीको पात वा मुन्टो खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । […] More
March 1, 2020, 1:10 pm
काठमाडौँ, फागुन १८ । होस्टल कति सुरक्षीत छन् ? यो प्रश्न उठाइरहँदा मुगुमा एक १३ बर्षिय किशोरको छात्राबासमा काम गर्ने सहयोगी अर्जुन सेजुवालको कुटाइबाट निधन भएको छ । मुगु प्रहरीका अनुसार छात्राबासका सहयोगीको कुटपिटबाट छाँयानाथ रारा नगरपालिका–१को नमुना माध्यामिक विद्यालयको कक्षा ६ मा अध्ययनरत १३ बर्षिय दिलीप भामको मृत्यु भएको हो । कु(टपि(टबाट गम्भिर घाइते […] More
कञ्चनपुरका वडाध्यक्ष लालबहादुरले गरे एकल महिलालाई बाख्रा वितरण
कञ्चनपुर, फागुन १८- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० का एकल महिलालाई आइतबार आयआर्जनका लागि बाख्रा वितरण गर्दै वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरलगायत । द्वन्द्वपीडित एकल महिला विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको शान्तिका लागि स्थानीय क्षमता कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा वितरण गरिएको हो । More
काठमाडौँ,काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम शून्य डिग्रीमा झर्दा पशुपति प्रसादकी चर्चित नायिका वर्षा शिवाकोटीले भने अर्धनग्न तस्विरले तिर हानिन् । उनको तिर कसैलाई नभई आफ्ना दर्शकलाई थियो । चिसो बढ्दै थियो वर्षाले आफ्ना हट अवतारका तस्विरहरु एकाएक पासाका रुपमा फ्याक्दै गइन् । मिलनसार स्वभावकी मिडियाफ्रेण्ड्ली वर्षालाई थाहा थियो बढे्दै गरेको चिसोमा यि तस्विरको सहारा लिन सके मिडिया […] More
एजेन्सी – हालै बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले आफ्नो बिबाहको केहि नँया कुरा खुलाएकी छिन् । बलिउडमा एक छत्र राज गरेका प्रेम जोडि अनुष्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहलीले प्रेम विवाह गरेका थिए । लामो ससमय सम्म प्रेममा रहेका यिनिहरुले प्रेमलाई विवाहमा परीणत गरेका हुन् । नायिका अनुष्का शर्माको विवाह विराट कोहली संग सानै उमेरमा भएको […] More
March 1, 2020, 11:10 am
को हुन् प्रचण्डमाथी जु्त्ता प्रहार गर्ने ब्यक्ति ?
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०माथि राजधानीमा जुत्ता प्रहार भएको छ । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित नेकपा नेता भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृति सभामा प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार गरिएको हो । प्रचण्डले सभामा संबोधन गरेर सिटमा बस्न लागेका बेला प्रचण्डमाथि दर्शकदीर्घाबाट जुत्ता प्रहार भएको हो । उनलाई […] More
March 1, 2020, 10:55 am
एजेन्सी – बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार अभिनित चलचित्र सूर्यवंशीको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक पोष्टरमा नायक अक्षय कुमार रिसाहा भुमिकामा देखा परेका छन् । भने पोष्टरसंगै सिरलिज मिति पनि घोषण गरिएको छ । चलचित्रको पोष्टरमा उनि रेड स्पोर्टस बाइकमा बसेर एक्शन दिइरहेका छन् । उनको पछाडि एक हेलिकोप्टर उडिरहेको पनि देख्न सकिन्छ । पोस्टर […] More
March 1, 2020, 10:45 am
तापसी पन्नू अभिनित बलिउड चलचित्र ‘थप्पड’ले दुई दिनमा गर्यो धमकेदार व्यापार
एजेन्सी बलिउड चलचित्र थप्पडले बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गरेको छ । २४ फेब्रुअरीमा रिलिज भएको उक्त चलचित्रलाई अनुभव सिन्हाले निर्देशन गरेका छन् । अभिनेत्री तपसी एक साहासि महिलाको भुमिकामा देखा परेकी छिन् ।पहिलो दिन तीन करोडको कमाई गरेको यस फिल्मले शनिबार पाँच करोडको कमाई गर्न सफल भएको छ । १० करोडमा निर्माण भएको यस फिल्मले […] More
March 1, 2020, 10:42 am
काठमाडौ- अनार स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुले गरेका हुन्छन् । अनारको स्वाद गुलियो हुन्छ । यसको सेवन गर्दा भिभिन्न रोगबाट मुक्त हुन् सकिन्छ । धेरै मानिसहरुलाई थाहा छैन होला अनार सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर गर्मी महिनामा यसको धेरै सेवन हुन्छ । अनार […] More
March 1, 2020, 10:32 am
मुटु पोलेर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खानुहोस तरुल हुनेछन् नसोचेका फाइदै फइदा
काठमाडौँ -स्वादका लागि मात्र नभएर स्वाथ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा हुन्छ । तरुल मानव सभ्यताको विकासको सुरुवाती चरणमा मानिसले खाने भनिएको कन्दमूल मध्येको एक तरुल पनि हो । तरुल प्राय सबैको भान्सामा पाकिने तरकारीको रुपका पनि लिइन्छ । यसलाई उसिनेर खाने पनि गरिन्छ । तरुललाई मागेसक्रान्तिमा खाने गरिन्छ । तरुललाई आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा पनि प्रयोग […] More
March 1, 2020, 9:48 am